Ny lahatsoratr'i Chris Rothstein momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chris Rothstein
Raha mikasika ny varotra rindrambaiko SaaS, ny fitodihana olona dia tsy maodely amin'ny fahombiazana. Rehefa dinihina tokoa, olona 5.4 eo ho eo no mandray fanapahan-kevitra amin'ny varotra orinasa tokana. Raha jerena fa ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia fanao mahazatra, ny varotra miorina amin'ny kaonty (ABS) dia mahomby kokoa noho ny mikendry fitarihana manokana. Ny fomba fiasa miorina amin'ny kaonty amin'ny fivarotana kosa dia mety handany fotoana. Manara-maso metrika sy fandaharam-potoana lalindalina manerana ny tanjona marobe, ary koa ny fiaraha-miasa amin'izany vaovao izany manerana ny ekipa anatiny,